Damaca Kheyre iyo Doorashda 2020. – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 Last updated May 16, 2020
Muqdisho-Hornafrik:- Raisulwasaraha Jamhuuriyadda Federeaalk ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ah raisulwasaarihii ugu mudada dheeraa xukuumadihii dalka soomaray buburka kadib ayaa in dhawaaleba waday firfircooni iyo dadaal dheeri ah oo uu isku muujinayo siyaasad ahaan taas oo dhalisay shaki badan kadib markii uu dhistay koox u gooni ah oo asaga aad u taabacsan loona maleynayo in ay gooni uga istaagi doonaan kooxdii ay mudada siyadadda ku mideysnaayeen oo uu madaxweynuhu ugu weynyahay.
Tan iyo markii ay soo ifbaxday is muujinta R/W kheyre iyo loolanka siyaasadeed oo sida hoose asaga iyo kooxdiisu u wadaan taasi oo ay ku doonayaan in Kheyre noqdo musharax maxadweynaha 2020, taas oo dhabar jab weyn ku noqon doonato madaxweynaha iyo kooxdiisa ku dha-dhaw ayaa dhan kale waxaa sii badanayay kala shakiga iyo tuhunka ah kheyre iyo kooxdiisu in ay safka ka bixi doonaan.
Waxyaabaha shakiga weyn dhaliyay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah ayaa la leeyahay isku dayga kheyre ee uu ku dadaalay in uu saameyn mug leh ku yeesho sameynta maamul goboleedyada taas oo fursad siin doonto doorshada 2020 in uu helo ama talo ku yeesho xubnaha baarlamaanka ee laga soo dooran doono maamul goboleedyada.
Sidoo kale waxaa shaqayn waayay oo marba aanan suuragalin dhisidda Xisbiggii weynaa ee ay dowladdu dhawr jeer oo hore ku dhawaaqday in ay samaysan doonto, taas oo loo sababeynayo in R/W kheyre iyo kooxdiisu ka biya diidsanyihiin, isla markaan damacsanyihiin in ay sameystaan xisbi u gooni ah ayna musharax ka dhigtaan Raisul Wasaare kheyre, taas oo haddii ay dhacdo keeni doonta in Nabad iyo Nolol toos u kala guuraan.
Raisulwaasaraha aya isku dayay in uu saameyn weyn ku yeesho dhisiidii maamuladada Jubabbaland, Galmudug iyo Koofur Galbeed oo intuba samaysmay hadana shaqeeya.
Jubaland oo uu Ra’isulwasaaruhu isku dayay in uu xirir fiican la sameeyo waa shaqeyn weyday kadib markii madaxnweynaha laga fujin waayay in Ahmed madoobe baxo taas oo keentay in Axmed Madoobe gabi ahaanba albaabka ka xirto dowladda feredaalka ah oo dhan, walow la isku dayay faragalin kasta oo shaqeyn kartay hase yeeshee gabi ahaanba lagu hungoobay.
Waxaa sidoo kale dhismay maamul goboleedka Koonfur-galbeed oo xoog iyo xeeelad la isugu geeyay ugu dambeyna madaxweyne Lafta gareen lasoo saaray dadaal dheeri ah oo ay xukuumaddu garwadeen u ahayd. Waxaa dhawaan sidoo kale loo sameeyay baarlamaan walow doorashadii baarlamaanka iyo guddoonkiisaba ay saameyn weyn ku lahaayeen koox ka socotay xafiiska madaxweynaha taas oo muujinaysa kala aragti duwnaanshaha labada xafiis ee Ra’isulwasaaraha iyo kan Madaxweynaha.
Maamulka galmudug ayaa asna ka mid ah kuwa dhawaan la dhisay walow dhib badan laga maray caqabado waaweyn oo ugu dambeyn looga gudbay xoog iyo xeelad wada jira sida caadada u ah siyaadda kheyre, kooxda Kheyre aad ugu faraxeen guusha ay ka gaareen, waxa ay aamineenna in ay kaga adkaadeen Xafiiska madaxweynaha, waxayse arrintu is badashay markii siyaasiyiin u badan mucaaradka iyo madaxweynaha galmudug Mudane Qoor Qoor isku afgarteen in galmudug mid ah la sameeyo taas ugu dambeyn Xaaf iyo intii diidaneyd habkii loo dhisay maamulkaas ku qancaan dib u heshiisiina ay aqbaaleen oo ah in ay la shaqeeyaan dowladda madaxweyne Qoor Qoor.
Tan iyo wiixi ka dmabeeyay midowgii reer galmudug, waxaa yaraaday saameyntii ay Xafiiska iyo koxda Raisul Wasaaruhu ku lahaayeen Galmudug taas uu iminka u muuqata mid yaraayneysa rajada ah in saameyn xafiisku Raisulwasaaruhu ku yeesho doorashada 2020 Xildhibaanada laga soo xuli doono Galmudug, taasi oo muujineysa sida uu dhicisoobay halgankii Kheyre.
Raisul wasaare kheyre ayaa hada wada dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu dhisayo maamulka waqtigiisii maalmaha ka hareen ee Hirshabeele. Warar lagu kal soon yahay ayaa sheegaya in markaan Kheyre rabo in uu ku fara adeygo sidii uu Hirshabeelle ugu dhiibto qof uu ku kal soon yahay si uusan ugu fashilmin sida galmudug oo u muqato in uu ku tacab khasaaray waqtiga iyo dhaqaalaha uu galiyay iyo natiijada ugu dambeyn kasoo baxday.
Sida xogtu sheegeyso shaqsiyaadaka kheyre aadka ugu kal soo nyahay ee iminka aadka loo hadal hayo ee uu rabo in Hirshabeelada cusub majaraha u qabtaan waxaa ka mid saaxibkiisa dhaw ama lagu sheego gacantiisa midig, wasiirkiisa Amniga Gudaha Maxamed abuukar Islow Ducaale oo ah nin ganacsade ah walow uusan ahayn dadka aadka saameynta ugu leh siyaasadda hase yeeshee dhawr ganaci oo waaweyn oo uu kheyre shirko kula yahay darteed uu yahay ninka ugu dhaw ee uu aamini karo hada madama dhawr dhawr jeer uu ku fashilmay saaxiibo siyaadeed sida Qoor Qoor iyo Lafta gareen oo aakhiritaankii dhabarka u jeediyay.
Wasiir Ducaale ayaa aad loogu dhaliilaa in uu ku fashilmay shaqada xafiiskiisa, waxaana aad loo xasuustaa in qaraxyadii ugu dhimashada badnaa ay dhaceen inta uu xafiiska joogay, ayadoo dhawr jeer uu xafiiska madaxweynuhu kasoo gudbiyay cabasho kuna taliyay in xilka laga qaado Isloow Ducaale, waxaase arintaad ka dhaga adeygay Raisulwasaare Kheyre oo ku dhici waayay in uu xilka ka qaado saaxiibkiis, saaxiibtinimada iyo ganacsiga ay shirkada ku yihiin darteed.
Islow ducaale ayaa kasoo jeeda deegaanka Hirshabeela, waana nin aad loogu xushmeeyo reerka uu kasoo jeedo oo dhaqan ahaan deegankaas aadna looga sharfo, mase jirto kalsooni siyaasadeed oo ay dadku ku qabaan oo ah inuu kasoo dhalaali doono xilkaas waaba haddii uu helo sida ay leeyihiin dadka aadka u dhaliila. Arintan ayaa ah isku daygii ugu dambeeyay iyo rajada kaliya ee ah in kheyre sameyn mug leh ku yeesho maamulguboleedyada si xulista xildhibaanada laga soo doorto maamulkaas galaangal uu ugu yeesho iyo in ay soo baxaan dad asaga daacad u ah ama siyaadiisa taageersan.
Caqabadaha u weyn ayaa noqon doona in maamulka Hirshabeele oo markii hore lagu heshiiyay in rer Hiiraan qaataan Madaxweynaha, halka Caasimadana lasiiyo Rer shabeelabaha dhexe. Heshiiskaas oo muddo soo shaqeynayay lama oga sida looga gudbi doono ama lagu qancin doono siyaasiyiinta reer hiiraan maadaama Ducaale kasoo jeedo shabeelaha dhexe oo hada ah caadimadda maamulka Hirshabeele.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kheyre damacsanyahay in Caasimadda loo raro Buulo burte oo ka mid ah gobolka Hiiran, si maamulkaas uu ducaale Ducaale uga dhigo, sidoo kale saxiibkiisa dhaw ee Wasiir Canshuurka, wasiirka wasaaradda boostadana uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Si kastaba ha ahaateee lama oga sida uu kheyre u suura galin doono isku daygaas walow saamileyda siyaasadda deegnadaas ay aad u badan yihiin kana duwan yihiin kuwii uu horay uga soo adkaaaday hase yeeshee ugu dambeyn fashilka ku dhamaaday.